मानिस झैं यताउता हिँड्ने र वरपरबाट सामान ल्याउने रोबोट अन्तरिक्ष केन्द्रमा पुग्यो !::Dhankuta khabar
मानिस झैं यताउता हिँड्ने र वरपरबाट सामान ल्याउने रोबोट अन्तरिक्ष केन्द्रमा पुग्यो !
भदौ १०,एजेन्सी /
रुसले पहिलो मानवाकृत (ह्युमनोइड) रोबोट सफलतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र (आइएसएस)मा मङ्गलबार स्थापना गरेको छ । गत साता रुसको यो अभियान असफल भएको थियो ।
नासाका एक जना टिप्पणीकर्ताले भने, “सम्पर्क स्थापित भएको छ, रोबोट अन्तरिक्ष केन्द्रमा जोडिएको छ ।” रुसी अन्तरिक्ष केन्द्र रोसकोसमोसले पनि मानवविहीन सोयुज एमएस–१४ यानको सहयोगमा उक्त रोबोट अन्तरिक्षमा पुर्याइएको जनाएको छ ।